साबुनको रङ जस्तो भए पनि फिँज सधैं सेतो आउँछ किन ?
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौं । साबुन लगभग सबै मानिसहरुले प्रयोग गर्छन् । साबुन विभिन्न रङहरुमा उपलब्ध हुन्छ । तर तपाइँले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, सबै साबुनको फिँज किन सेतो हुन्छ ? वास्तवमा साबुनको फिँज कुनै ठोस पदार्थ होइन । ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले पाए यस्तो उपमा, गुगलसँग मागियो जवाफ
जहाँका मानिस दुई देशको नागरिकता बोक्छन् : खाने एउटा देशमा, सुत्न अर्कोमा
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौं । विश्वमा सधैं केही न केही अचम्मलाग्दा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा केही विषयहरु लामो समयदेखि सामान्यरुपमा भइरहेका हुन्छन् तर यो सुन्नेलाई भने अचम्म लाग्ने गर्छ । विश्वमा यस्तै अचम्मलाग्ने किसिमको गाउँ छ । जसको बारेमा धेरै मानिसहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । ... बाँकी अंश»
अध्ययन भन्छ - आफन्तबाटै असुरक्षित छन् महिला
२०७५ पौष ६ शुक्रबार, धनगढी । महिला माथि हुने हिंसा मध्ये अधिकांश घटना घर तथा आफन्तबाट हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ओरेक नेपालको वर्ष पुस्तक अन्वेषीकाका अनुसार महिला आफन्त तथा परिवारका सदस्यबाट असुरक्षित हुने र हिंसामा पर्ने गरेको देखाएको छ । ... बाँकी अंश»
जहाँ लाग्थ्यो अविवाहित पुरुषमाथि कर
२०७५ पौष ६ शुक्रबार, काठमाडौं । कुनै पनि राज्यले व्यक्ति वा विभिन्न संस्थाहरूबाट लिइने सम्पति लाई कर भनिन्छ। करहरू सरकारी आयको एक स्रोत हुन्। यीनै रकमबाट सरकार देशको निर्माण र अन्य आवश्यक सेवाहरूको उपलब्ध गराउछ। करहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । जस्तै आय कर, घर भूमि कर र बिजुली र पानीमा लगाइने कर। अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने संसारमा यी कर बाहेक अन्य केही कर पनि लगाइने गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
नेपालमा मात्र होइन विश्वभर स्कुलबसको रङ किन पँहेलो हुन्छ ?
२०७५ पौष ४ बुधबार, काठमाडौं । मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय बाल्यकाल नै हो । यो समयमा उनीहरुको काँधमा कुनै जिम्मेवारी हुन्छ भने त्यो पढाइको जिम्मेवारी हो । यस्तोमा स्कुलको विषयमा पनि धेरै बालबालिकाहरुको विषयमा कुरा हुने गर्छ । हाम्रो स्कुल यस्तो र उस्को स्कुल यस्तो भनेर उनीहरुको बीचमा धेरै चर्चा हुने गर्छ । तर सबै समान उनीहरुको स्कुलको बसको रङ हुन्छ । सबै स्कुलबसको रङ किन पँहेलो हुन्छ त ? ... बाँकी अंश»
इन्टरनेटमा भाइरल भइन् ट्रम्पजस्तै देखिने यी महिला
२०७५ पौष ४ बुधबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै देखिएको एक महिलाको फोटो भाइरल भएको छ । खेतमा कोदालो काँधमा राखेर उभिएकी महिलाको फोटो भाइरल भएको हो । ... बाँकी अंश»
शाहरुखको चलचित्र 'जीरो' को विवादित सिन हट्यो
२०७५ पौष ४ बुधबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको आगामि चलचित्र 'जीरो' का निर्माताले मुम्बई उच्च अदालतमा जवाफ पेश गरेका छन् । चलचित्रको तर्फबाट रेड चिलीजले किंग खानको एक सिनलाई लिएर मुम्बई हाई कोर्टमा जवाफ पेश गरेको हो । ... बाँकी अंश»
७ वर्षका बालकले कमाए करोडौं रकम, खेल्ने उमेरमा बेच्दै छन् खेलौना
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो आम्दानीको पनि राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ । यस्तोमा सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा पनि यस्ता धेरै प्रतिभाहरु सुपरस्टार बनेका छन् । साथै उनीहरुले उल्लेख्य रकम पनि आम्दानी गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
विश्वका पत्याउनै गाह्रो हुने आश्चर्यजनक सत्यहरु
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौं । यो पृथ्वी विशाल छ । यहाँ धेरै रहस्यहरु र अचम्म लाग्ने कुराहरु लुकेका छन् । यस्तोमा केही रहस्यहरु यस्ता हुन्छन्, जसलाई पत्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । ... बाँकी अंश»
ईशा अम्बानीको विवाहको न्यापकिनको मूल्य कति ?
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौं । सबै मानिसहरुको विवाहको पार्टी एकै किसिमको हुँदैन । सबैले आफ्नो क्षमताअनुसारको विवाह वा अन्य पार्टी दिने गर्छन् । यसै क्रममा भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको छोरी ईशा अम्बानीको विवाहले अहिले चर्चा पाएको छ । ... बाँकी अंश»
स्वस्थ भएर १०० वर्ष जिउनु छ ? गर्नुस् एउटै काम
२०७५ मङ्सिर २९ शनिबार, काठमाडौं । 'ब्लू जोन्स' का लेखक डान ब्यूटनरले दुनियाँका ती पाँच क्षेत्रको अध्ययन गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
मेक्सिकोमा तेस्रो लिङ्गीको जन्म : खुशीयालीमा मनाईन्छ उत्सव !
२०७५ मङ्सिर २९ शनिबार, काठमाडौं । मानव जीवनचक्र चलाउनको लागि महिला र पुरुषबाट नै समाज चलिरहेको छ । तर, ... बाँकी अंश»
भारतीय युवतीहरु किन गर्दैनन् चिनियाँ केटासँग विवाह ?
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । चिनियाँ इन्टरनेट क्षेत्रमा पछिल्लो समय एक बहस बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ – भारतीय युवतीहरु किन चिनियाँ केटासँग विवाह गर्दैनन् ? केही समयअघि सेलाएको यो विषय केही दिनयता पुनः सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
जर्मनीका सडकमा चकलेटको खोला !
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । जर्मनीको वेस्टोनन शहरको सडकमा सोमवार राति चकलेटको खोला निक्लियो । शहरको ड्राइमास्टर चकलेट फ्याक्ट्रिको एक ट्याङ्कमा ओभरफ्लो भएका कारण नजिकै रहेको वेस्टस्ट्रेसे रोडमा तरल चकलेट बग्न थाल्यो । ... बाँकी अंश»
१४ हजार फीटबाट हाम फालिन् १०२ वर्षकी वृद्धा
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाकी वृद्धा इरेन ओशीले १४ हजार फीटबाट हाम फालेकी छन् । १०२ वर्षको उमेरमा उनको जोश र फुर्ती युवाको भन्दा कम छैन । उनका जोश देखेर जो कोहि मात खान्छ । ... बाँकी अंश»
हुनेवाला दुलहीलाई 'मूर्ख' भन्दा २ महिनाको जेल
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । अबुधाबीमा एक युवकले आफ्नो हुने वाला दुलहीलाई जिस्कदै वाटएप्समा ' मूर्ख' भन्नु भारी परेको छ । सो म्यासेजको लागि उनलाई २० हजार दिराम अर्थदण्ड र दुई महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ । ... बाँकी अंश»
अमेरिकी सांसदको प्रश्न - यस्तो खोज्दा किन आउँछ ट्रम्पको तस्बिर ?
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिको युगमा मानिसहरु अनलाइनबाटै आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउने गर्छन् । यस्तोमा अनलाइन खाखेजी इन्जिन गुगल अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुने गरेको छ । गुगलमा अनलाइन खोजी गर्ने क्रममा ‘इडियट’ अर्थात् मूर्ख भनेर खोजी गर्दा ट्रम्पको पनि फोटो आउने गरेको छ । यस विषयमा गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाइले अमेरिकी संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
जर्मनीको सडकमा चकलेटको खोला बगेपछि...
२०७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार, काठमाडौं । जर्मनीको वेस्टोनन शहरको सडकमा सोमवार राति चकलेटको खोला निक्लियो । शहरको ड्राइमास्टर चकलेट फ्याक्ट्रिको एक ट्याङ्कमा ओभरफ्लो भएका कारण नजिकै रहेको वेस्टस्ट्रेसे रोडमा तरल चकलेट बगेको हो । ... बाँकी अंश»
यी बालिका रोएको देखेर यूएईका प्रधानमन्त्रीले भने – को हो पत्ता लगाऊ
२०७५ मङ्सिर २७ बिहिबार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल यस्तो ठाउँ बन्न पुगेको छ, जहाँ धेरै मानिसहरु नयाँ आशा मिलेको छ । केही मानिसहरुले यसैबाट प्रसिद्धि पनि कमाएका छन् । यसैक्रममा एक बालिका पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चर्चाको शिखरमा रहेकी छिन् । ... बाँकी अंश»